Uyifumana njani i-Aquarius Man Back: Into ekungekho mntu ukuxelelayo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Uyifumana njani i-Aquarius Man Back: Into ekungekho mntu ukuxelelayo
Uyifumana njani i-Aquarius Man Back: Into ekungekho mntu ukuxelelayo
Indoda ka-Aquarius iphupha lenkululeko nokwenza into enqwenelwa yintliziyo yakhe. Esi isenokuba sesona sizathu siphambili sokuba ungasenakubakho naye, kodwa inokwahluka kubudlelwane obuye kolunye.
Kuba le yinto ayenza amaxesha amaninzi, kunokuba nzima ukumqinisekisa ukuba abuye kunye nawe kwaye anikezele inkululeko yakhe, ke uzokulwela ukwenza izinto ngendlela ebezifudula zikhona.
Iingcebiso ezi-5 eziphezulu malunga nokubuyisa indoda ye-Aquarius:
Phola malunga nokuqhekeka, sukuba neemvakalelo ezigqithileyo ebusweni bakhe.
Mnike indawo kodwa ulungele ukuvula xa efumaneka.
Sukubhenela kubo nabuphi na ubuxoki kuba ukuba ubanjiwe, akazukukuxolela.
Phinda uqalise into ngawe ukuze ubambe umdla wakhe.
Bonisa ukuba ukulungele ukulalanisa.
Xa uzama ukubuyisela indoda ye-Aquarius, qiniseka ukuba awumbonisi ukuba izinto ziya kuba kanye njengokuba zazinjalo nje nina nobabini niza kudibana kwakhona. Uya kuba noloyiko ulwalamano lwakho olutsha luya kukhokelela kuqhawulo kwakhona kwaye akukho namnye kuni oya kufuna oku.
Makahambe ke uzobuya
Eyona ndlela yokuphumelela ukubuyela kwindoda yakwa-Aquarius kukuba upholile malunga nokwahlukana kwaye umyeke ahambe.
Okukhona uya kubambelela kule nto beninayo nobabini, kokukhona uya kuzama ukuziqhelisa kuwe, ungasathethi ke indlela ayicaphukela ngayo idrama, iingxabano kunye nokuhlatywa emqolo.
Ukuba uqhubeka ukuphepha konke oku, uya kubuyela kuwe ngokukhawuleza kunangoku, okanye mhlawumbi angacebisa ubuhlobo obusondeleyo phakathi kwenu nobabini.
Kuba umqondiso wakhe umenza athambekele kutshintsho olukhawulezileyo, angabuya kuwe ngesithembiso sothando xa ungalindelanga. Akukho nzima ukubuyisela ubudlelwane emva kokwahlukana nendoda ye-Aquarius ukuba uyazi ukuba wenzani.
Ke ngoko, ukuba ufuna indoda yakho ibuye, yenza nje utshintsho malunga nomfanekiso wakho, kodwa qiniseka ukuba uyaqaphela. Kuya kufuneka usondele kwindawo yakhe efanelekileyo kwaye wenze le nto ngawe iqapheleke.
Into ekufuneka uyikhumbule xa uzama ukubuyisela indoda yakho ye-Aquarius kukuba ungaze uthethe nayo ngekamva lakho kunye.
loluphi uphawu ngoJanuwari 4
Musa nje ukukhankanya nantoni na malunga nesidlo sangokuhlwa nosapho lwakho okanye umtshato kuba uyithiyile ukwenza izicwangciso kunye nokucinga ngaphambili.
Kunzima kakhulu ukuba le ndoda izibophelele, ke ungazami ukunyanzela ubudlelwane bakho kuye, nokuba uyinxalenye yayo. Kunzima ukujongana nokwahlukana, nokuba wena neqabane lakho benivana kangakanani.
Xa kuziwa kwindoda ye-Aquarius kule meko, ufuna isikhumba esirhabaxa. Akasoze amkele ukuxolela inenekazi lakhe ngokungcatsha, ke kuya kufuneka uphephe ukwenza into embi kuye nangaliphi na iindleko.
Akuyi kuba yinto engenakwenzeka ukuba ubuyele kunye naye, kodwa kuya kufuneka uvuleke, uthembeke kwaye ulungele ukunonga ubomi bakho bothando. Ufuna iqabane lakhe limothuse yonke imihla.
yeyiphi i-horoscope ngo-septemba 22
Ngaba umnika indawo eyaneleyo?
I-Eccentric kwaye ixesha elininzi isithandwa esinemvukelo, indoda ka-Aquarius ayinakuze yamkele umntu ukuba amnyanzele ukuba enze ubudlelwane. Akayi kuhlala phantsi ade alungele ngokupheleleyo ukuyenza.
Unokuba ngqongqo kancinci, ke ukuba ugqibe kwelokuba akukho nto imbi iza kuphuma kubudlelwane bakho naye, akukho mntu uya kumqinisekisa ngento eyahlukileyo.
Kubalulekile ukuba uhlale uyihlonipha into ayifunayo kwaye umvumele ukuba abe nobuzaza kwizinto ezingaqhelekanga ngesantya sakhe.
Hlonipha nje into ayinqwenelayo ngokwembono yothando kwaye awuyi kuphoxeka. Uya kufuna ukuphathwa ngokufanayo, ke mvumele ukuba afune okufanayo kuwe.
Bonisa indlela onomdla ngayo ekuhlaleni
Ukuba ufuna indoda yakwa-Aquarius ibe yeyakho ngonaphakade kwaye izinto phakathi kwenu nobabini niphinde nisebenze kwakhona, yibani ngabahlali kangangoko. Uyakuthanda ukwenza abahlobo abatsha nokuya emapatini.
Kusenokwenzeka ukuba uya kufuna ukuphuma rhoqo ngeempelaveki kwaye atyelele yonke ibhari edolophini. Le ndoda inika ukubaluleka kakhulu kubuhlobo, ke iya kuthandana nomnye wabahlobo bayo abasenyongweni.
Ke ngoko, ukuba ufuna ukuba ngomnye wabo bantu, zilungiselele ukukhutshwa kwindawo yomhlobo ngaxa lithile. Yixabise into yokuba nabahlobo abaninzi kangangoko enako kwaye ungathandabuzi ukuxubana emathekweni. Uyakulithanda nje inenekazi elihlalisana kakuhle nabantu bonke.
Ayaziwa ngokuxoka okanye ngokunganyaniseki, indoda ka-Aquarius ilindele ukuba iqabane layo lifane. Intuition yakhe yomelele kakhulu, ngoko ke unokuqiqa kwangoko ukuba uyaxoka kuye.
Kuba ufuna kakhulu ukuba phakathi kwabanye kunye nokunxulumana, ubukrelekrele bakhe beemvakalelo bungaphezulu kakhulu kwabanye. Kulula kuye ukuba afunde abantu kwaye abone iinjongo zabo zokwenyani, ngakumbi ezo zomntu ebekhe wanobudlelwane naye.
Mqinisekise ngeyona njongo yakho intle
Ngelixa amadoda e-Aquarius aziwa ngokudlala ngothando, banokuba nomona kwaye bagcinwe kakhulu. Ewe abayi kwenza kumona wabo, kodwa ngokuqinisekileyo abayithandi into yokuba ulwalamano lwabo lusongelwe ngomnye umntu.
Kwimeko apho uye wahlukana nendoda ye-Aquarius kwaye usenethemba loxolelwaniso, musa nje ukuthandana nabanye abantu ukuze umenze abe nomona.
Kufuneka aqiniseke ukuba ngoyena mntu umfuna kakhulu. Thetha ngothando lwakho ngaye kwaye wenze okuthile malunga nalo kuba unokubuyela kuwe kwakamsinya kunangoku.
Ukuba krelekrele kakhulu kwaye uluvo kakhulu, indoda ka-Aquarius iyathanda ukutshintshiselana ngezimvo malunga nezihloko ezahlukeneyo zencoko.
loluphi uphawu lwenkwenkwezi ngo-Okthobha we-19
Ingqondo yakhe iyakhawuleza kwaye isengqiqweni, ke unokujongana nemixholo emininzi, ukusuka kwizizathu zokunceda ukuya kufunyenwe kutshanje kwitekhnoloji. Uhlala enomdla wokuveza izimvo zakhe, ke kuyakufuneka umphulaphule xa ethetha.
Ungaze ulawule okanye ungxolise, enyanisweni uhlalutya kwaye unenjongo. Uninzi lwabahlobo bakhe lufuna ukuba ajikeleze kwiingxoxo kuba unokubona imiba kwiindlela ezahlukeneyo.
Mnike iindidi ezaneleyo
Kwimeko apho ufuna ukwenza ukuba indoda ye-Aquarius iphinde ikunake, yenza into malunga nokuzihlaziya. Ulikhoboka lokwahluka xa kufikwa kuthando. Ukuba uqaphela into eyahlukileyo ngawe, uya kufuna ukwazi ngakumbi, ke amathuba akho okubuyela kunye naye aya kwanda.
Unokwenza into malunga nendlela obukeka ngayo, uthathe umdla kwinto entsha oyithandayo kwaye ubenomdla ngakumbi. Ngokudibanisa umlilo kwindlela okhangeleka ngayo kunye nokuziphatha kwakho, ungambamba njengentlanzi kumnatha.
Ngokukhawuleza xa sele eqale ukutsala umdla wakho kwakhona, mqinisekise ukuba ukulungele ukwenza nantoni na ukuze ulwalamano lwakho lulungiswe.
Musa ukulindela ingqalelo enkulu kuye
Indoda ezelwe e-Aquarius ayidumanga ngokuthanda kwayo kunye neemvakalelo zayo. Njengokuba kunjalo, uninzi lwee-ex zakhe zikhalaza ukuba wayengenalo ulwalamano ngokwaneleyo xa bekunye nabo.
Ngelixa unontlalontle kwaye evulelekile kakhulu ukwenza izihlobo ezitsha, angazibekela iindonga kwaye angavumeli nabani na ukuba eze emhlabeni wakhe, nokuba kungomlingane okanye umhlobo.
Ingakhathaza into yokuba ube nomntu ozihlukanisileyo kwaye ongathandekiyo, kwaye ukuba kunokwenzeka ube liqabane lakhe, vele uqonde ukuba obu bunjani bakhe.
Ngokuqinisekileyo uziva eluthandweni nawe, nokuba akatsho ngokuvakalayo. Kwimeko apho ungazi ukuba umi phi xa kufikwa kuye, unganqikazi ukubuza nje kuba unyanisekile kubathandi bakhe. Nangona kunjalo, musa ukwenza unqwenela uthando lwakhe njengoko efuna inkululeko yakhe kakubi kwaye uyakucaphukela ukunyanzelwa.
Yamkela ukuphila ngemithetho yakhe
Kuba indoda ka-Aquarius iphila ngemithetho yayo, ngamanye amaxesha inokuba nezimvo ezibonakala ngathi ziyathandeka kubahlobo bayo abaninzi. Le ndoda ineengcinga eziphakamileyo kwaye icinga ngezimvo ezintle, ke amaphupha akhe ngamanye amaxesha makhulu kunobomi uqobo.
Ingqondo yakhe yobulungisa iphuculwe kakhulu kwaye ngamanye amaxesha ucinga umhlaba ogqibeleleyo. Unokubonisa zonke ezi mpawu zakhe ngokuthetha into enokukukhathaza, ngakumbi xa umzuzu ungalunganga kwaphela.
Kuya kufuneka uphephe ukumxelela ukuba makenze ntoni na. Ungumvukeli kunye nomntu othanda kakhulu kwaye akukho mntu unokutshintsha oku ngaye.
Le ndoda ayikhathali xa umntu engavumelani nayo, ukuze uzibonakalise ngokukhululekileyo phambi kwakhe. Uya kuba nexhala xa ephikisana, kodwa loo nto ayiyi kuba ngumcimbi omkhulu. Ungazami ukumtshintsha njengoko ungekhe wonwabe kwaphela ukuba umntu angayenza le nto nakuwe.
Luthini uphawu lweenkwenkwezi lwangoSeptemba 5
Uyitsala njani indoda ye-Aquarius: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza athandane
Indoda ka-Aquarius emtshatweni: Ngaba uluhlobo olunjani lomyeni?
Umhlaza Ilanga iGemini inyanga: Ubuntu obuqinisekileyo
U-Leo Man kunye noMfazi oLungeleleneyo ukuhambelana ixesha elide
pisces indoda capricorn umtshato womfazi
yintoni i-zodiac kaJulayi
uthini umqondiso womatshi 12
Iimpawu zeZodiac zangoMatshi 19
Iminyaka engama-25 (ngodisemba 4, 1992)